Cudurka Iboola oo ku dhow in daawo loo helay: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Cudurka Iboola oo ku dhow in daawo loo helay: WARBIXIN
Waxa in muddo ahba socdey sidii daawo fiican loogu heli lahaa cudurkan halista ee Ibola ee ka dilaacay dalakja Afrikada Galbeedka ayna xuduntiisu ahayd dalka yar ee Gini kadibna ku faafay dalalka faqiirka ee Laybeeriya iyo Siiraliyoon.
Dhimashada cudurka ayaa gaaraysa in ku dhow 20,000 oo qof mudadii uu aadka u kacsanaa. Waxana la cadeeyay in laga qaado hilibka duurka ee ay cunaan Afrikaanka ku nool dalalkaasi.
Cudurkan aya sanadihii dambe soo gaaray Afrikada Bari siiba dalalka Yugaandha iyo Kiiniya. Somaliya oo ay joogeen ciidamo Afrikaana oo qaarkood ka yimaadeen Afrikada Galbeed sida Siiraliyoon ayaa markiiba laga saaray.
Waxase jirey walaac ah in cudurka soo gaaray Kiiniya iyo Yugaandha ay Somaliya u soo gudbin karaan askarta Yugaandheeska iyo kuwa Kiiniya.
Hadaba Afar daawooyin oo baryahanba ku jirey tijaabo cudurka ayaa la sheegay in laba ka mida dadka ka daaweeyeen boqolkiiba 90 taas oo ka dhigan in qofku sii noolaan karo inta daawo wada buuxda la helayo.
Shirkada ka hortaga cuncunka iyo cudurada faafa ee Maraykanka oo iyagu daawadan la-waday hay’adda caafimaadka aduunka ayaa sheegtay in labo daawo oo tijaabo ahaa laguna magacaabo REGN-EB3 iyo mAb114 lagu arkey in boqolkiiba 90 ka daaweeyeen dad cudurka qabay haddana la geyn doono dalka Jamhuuriyada Koongo.
Jamhuuriyada Koongo ayaa hadda ah halka uu cudurkani ku dambeeyay markii horena ka soo ifbaxay sanadii 1976. ”Waxay tani fursad na siinaysaa in cudurkan bartiisa lagu xanibo oo uuna waxyeelayn bulsho balaadhan ayuu yiri madaxa urur samafala oo hawshan qayb ka ah.
Halista cudurkan ayaa ah in haddii uu kugu dhaco in maalintaas ay kuugu dambeyso ehelka iyo qaraabo oo xataa ayna iman Karin xabaashaada. RABI ha inaga hayee.